Wasiir Fiqi oo Digniin adag u jeediyay ganacsatada Galmudug ee lacagta siiya Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiir Fiqi oo Digniin adag u jeediyay ganacsatada Galmudug ee lacagta siiya...
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Galmudug ayaa digniin adag u jeediyay ganacsatada deegaanada maamulka, ee canshuurta siisa Ururka Al Shabaab, oo Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyaduba u aqoonsan yihiin urur argagixiso.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, ayaa ganacsatada reer Galmudug uga digay inay canshuur siiyaan Al-Shabaab, haddii kalana ay u aqoonsan doonaan kuwo Shabaab ah.
Axmed Macalin Fiqi, ayaa shaaca ka qaaday inaanay jiri doonin wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ganacsatada Galmudug, kadib markii uu sheegay in ay damaanad qaadayan suggida amnigooda.
“Ganacsatada Galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto, anaga ayaa damaanad qaadeyna oo nalaga rabaa amnigooda. Midda labaad ganacsatada Galmudug masaalix iyo dano kama lahan deegaanada Shabaab uu ku sugan yahay, oo taasi haddii ay halkaan bixin waayaan in danahoodii iyo ganacsigoodii ku lahaayen Al Shabaab dhexdeedii la burburiyo markaasi loogu booteeyo. Marka ma jirto ganacsi ku yaala Galmudug oo hadana laamo kale oo Al Shabaab gudahiis ku yaala oo markaasi qofkii looga soo hanjabo.” Ayuu yiri Wasiir Fiqi.
Wasiir Amniga ee maamulka Galmudug, ayaa ka dhawaajiyay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada ka hawlgasha Magaalooyinka Galmudug ee xorta ah, haddii lagu helo inay dhaqaale u direen, Shabaab kala soo hadlay dhul ka baxsan Galmudug.
“Qofka joogga Gaalkacyo, Cadaado, Caabudwaaq, Dhuusamareeb, Guriceel, Hobyo ama meelkastoo xora oo Shabaab inta ay u hanjabaan, u indho gaduudiyaan lacag siiya, waxaan u aqoonsaneynaa in uu Al Shabaab maalgeliyo, oo dadka dhaqaalaha siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaabulo dagaalada in uu yahay qofka dhaqaalaha ku siiyo oo ka dambeeyo.” Ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi, Wasiirka Amniga Galmudug oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da
Axmed Macalin Fiqi, ayaa hoosta ka xariiqay, in ay iminka gacanta ku hayaan sharciga la dagaallanka argagixisada, oo dhawaan ay u gudbin doonaan Baarlamaanka Galmudug, isla-markaana uu qeexi doono tallaabada ay tahay in laga qaado ciddii dhaqaale siisa Ururka Al-Shabaab.
“Waxaan hadda gacanta ku heynaa sharciga argagixisa la dirirka oo Baarlamaanka Galmudug aan u diri doono. Sharcigaasoo qeexi doono dhammaan xuquuqaadka ay la kulmi doonaan.” Ayuu yiri Wasiir Fiqi.
Wasiir Fiqi ayaa carabka ku adkeeyay, haddii ganacsatada lagu helo falkaasi in ay u aqoonsan doonaan kuwa ka dambeeya falalka guracan, ee ay argagixisada ku dhibaateynayso shacabka.
“Marka haddii ay jirto arrintaasi, runtii waxaan u aqoonsaneynaa kan na dilaya inuu ka xun yahay midka nala jooggoo lacagtii iyo ganacsigii dadkeena inta lacag naga qaata, canug xunoo uusan garaneynin oo Toora-toorow joogga inta teleefan u soo diro yiraahdo canshuur bixi. Runtii arrintaasi waxaan u qaadaneynaa qof maalgeliyay Al-Shabaab, qof hanti ku bixiyay qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka muteystuuna samayn doonaan, mana dhici doonto sida Xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmoo kale.”